विदेशबाट फिर्ता आउनेलाई खुशीको खबर ! चार्टर फ्लाइटको भाडा फेरि घ’ट्यो, कहाँको कति? [ सूची सहित ]- जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ ! – Jagaran Nepal
विदेशबाट फिर्ता आउनेलाई खुशीको खबर ! चार्टर फ्लाइटको भाडा फेरि घ’ट्यो, कहाँको कति? [ सूची सहित ]- जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ !
काठमाडौं – सरकारले विदेशबाट फिर्ता आउने नागरिकहरूका लागि तोकिएको चार्टर फ्लाइटको भाडा फेरि घटाएको छ । चार्टर फ्लाइटको भाडा म’हँगो भएको भन्दै आ’लोचना भएपछि सरकारले शुक्रबार केही भाडा घ’टाएको थियो । त्यसको २४ घण्टामा फेरि भाडा घ’टाएको हो । यसपटक भने प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूको मात्रै उडान भाडा घ’टाइएको छ । सय डलर नबढ्ने गरी २० प्रतिशतसम्म भाडा घ’टाउन नेपाल एयरलाइन्स सहमत भएको छ भने हिमालयनले गृहकार्य गरेर जवाफ दिने बताएको छ ।
मलेसिया र खाडीका गन्तव्यमा ९० देखि १०० डलरसम्म भाडा घ’टाइएको छ । नयाँ भाडादरअनुसार अब मलेसियाको भाडा ४६५ डलरबाट ३७२ ड’लर कायम भएको छ । त्यसैगरी दोहाबाट आउँदा यसअघि ४९० डलर लाग्ने भनिएकोमा अब ३९२ डलर कायम भएको छ । दुबईबाट नेपाल फर्किँदा ३६० डलर टिकट खर्च लाग्नेछ । यसअघि यस्तो खर्च ४५० डलर थियो ।
साउदीको दमामको भाडा ५३० बाट ४३०, ५६५ बाट ४६५ र जेद्दाको ६९० बाट ५९० डलरमा झारिएको छ । ओमानको भाडा ४६० बाट ३६८ मा झारिएको छ । बहराइनबाट फर्किने यात्रुले ३९२ डलरमा नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पाउने छन् । यसअघि बहराइनबाट फर्किने भाडादर ४९० डलर थियो । कुवेतको भाडा ५१० डलरबाट ४१० मा झार्ने सहमति भएको छ । जोर्डनको भाडा ७७५बाट ६७५ र साइप्रसको भाडा ८३० बाट ७३० डलर तोकिएको छ ।